ओलीले जहाँ–जहाँ हात हाल्छन्, त्यहाँ सिध्याउँछन् ! - News20 Media
May 2, 2021 N20LeaveaComment on ओलीले जहाँ–जहाँ हात हाल्छन्, त्यहाँ सिध्याउँछन् !
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, उनी जहाँ–जहाँ हात हाल्छन्, त्यहाँ सिध्याउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए । त्यहाँ बबाल मच्चियो । पार्टी फुट्यो ।
पछि सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताइदिएपछि दुवै पार्टी छुट्टाछुट्टै बनेका छन् । तर ओली रहेको पार्टी नेकपा एमालेमा विवाद र बबाल रोकिएन ।प्रधानमन्त्री ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच अहिलेसम्म बबाल चलिरहेकै छ । ओली एमालेपट्टि नै छुटेपछि यतिबेला माओवादी पार्टी भने शान्त छ ।
एमालेभित्र विवाद चलिरहेकै बेला ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एक पक्ष अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग हिमचिम बढाएपछि जसपा पनि फुटको संघारमा पुगेको छ । यतिबेला अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच विवाद बढेर कारवाही गर्ने र पार्टी फुटाउने अभ्यास सुरु भएका छन् ।
नेकपाका पूर्व वरिष्ठ पोलिट्ब्यूरो कृष्णप्रसाद धमलाको संयोजकत्वमा पार्टी विभाजन भएको छ । विप्लवले क्रान्तिको नाममा नेपाली जनतालाई फेरि धोका दिएकोले नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर नयाँ पार्टीको घोषणा गरिएको छ । नयाँ पार्टीको नाम जनसमाजवादी मञ्च नेपाल राखिएको छ ।
‘आन्दोलनले नेतृत्वलाई उचाइमा पुर्‍याउने तर अन्ततः नेतृत्वले नै जनता र क्रान्तिलाई धोका दिएको इतिहासका साक्षी स्वयं हामी नै छौं । तीनै नेतृत्वले आपूmलाई देवत्वकरण गरी क्रान्तिलाई विशर्जन गर्ने प्रबृत्ति हावी रहेको हुनाले लक्ष्य र गन्तब्यसम्म पुग्न नसक्नु विडम्वना नै बनिसकेको सन्दर्भमा सामन्तवादी, साम्राज्यवादी, जडसुत्रवादी चिन्तन र प्रवृत्तिका बिरुद्ध भिषण संघर्षको आंधिवेहरी सृजना गर्न अत्यन्त आवश्यक र जरूरी भइसकेको छ । तसर्थ, संगठनात्मक हिसाबले जनतालाई जनसम्प्रभूता सम्पन्न गरेर मात्र अब बाँकी अधुरो क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिने छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।